Annaga nagu saabsan - Shandong Glorious Laser Technology Co., Ltd.
Shandong Glorious Laser Technology Co., Ltd. (Tixraac GRS ee hoose), oo la aasaasay 2011, xarunteedu waxay ku taal Weifang, caasimadda Kite ee Shiinaha, waxayna xafiis laan ku leedahay magaalada Jinan.Alaabtayada ugu muhiimsan: Mashiinka goynta fiber laser / mashiinka calaamadaynta laser / mashiinka alxanka laysarka / mashiinka nadiifinta laysarka / mishiinka xargaha laysarka
Warshada cusub waxay u guurtay magaalada Weifang sanadka 2019, waxayna ku fadhidaa dhul dhan 100,000 mitir oo laba jibbaaran, dhismaha xafiiskuna waa 3,000 mitir oo laba jibbaaran.Waxaan leenahay guud ahaan 200 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan 50 xirfadlayaal R&D ah iyo 5 soo noqday.
GLORIOUS waxay heshay in ka badan 100 R & D shatiyo ay ku jiraan Reddot Award iyo IF Award, waxayna si adag u fulisaa habka xakamaynta tayada alaabta.
GRS waxay heshay shahaadooyin ISO, FDA, CE, iyo SGS waxayna dabooli kartaa baahida macaamiisha adduunka oo dhan.
Waanu Balan Qaadnay
Waxaanu ku siin doonaa qaybaha la isticmaalo qiimo wakaalada.
24 saacadood oo adeeg khadka ah, taageero farsamo oo bilaash ah.
Mashiinka ayaa la hagaajiyay ka hor inta aan la keenin, diskka hawlgalka ayaa ku jira bixinta.Haddii ay jiraan su'aalo kale, pls si naxariis leh ii sheeg.
Waxaan haynaa tilmaanta gacanta iyo CD-ga (Hagaha Fiidiyowga) ee ku saabsan rakibidda, hawlgalka iyo isticmaalka iyo dayactirka achine.
1. Mabda'a ganacsiga: macmiilka marka hore, guul sumcad, tayo aad u wanaagsan iyo adeeg tayo sare leh.
2. Falsafada ganacsiga;a.Tayada - saldhigga sawirka;Sayniska iyo tignoolajiyada -- furaha la iska qaado;Dawladnimada - mawduuca weligeed ah;Hal-abuurnimadu waa isha horumarka.b.Ku maamul shaqaalaha, tayada ku hagaaji saynis iyo teknoloji, ku guulaysta suuqa si tayo leh, horumarna horumarka hal-abuurnimo.
3. Ogaanshaha kooxda: Waxaan ku tiirsanahay ganacsiga si aan u noolaado, ganacsiguna waxay igu xiran tahay inaan horumariyo;Waxaan isku dayaa sida ugu fiican ganacsiga, shirkaduna waxay ii raadisaa faa'iido.
4. Habka ganacsiga: a.wax ku ool ah, hufan, ilbaxnimo iyo dadaal badan.b.Xaqiiqo ah, dhab ah, dadaal badan oo hufan.
5. Ruuxa ganacsiga: a.jecel warshadda, dadaalka, hormuudnimada iyo ganacsiga.b.Dedaal, xilkasnimo, shaqo adag iyo hal-abuur.c.
6. Anshaxa xirfadeed: a.Isticmaalayaashu waa waalidiinta cuntada iyo dharka, adeegayaashuna waa mas'uuliyadda aasaasiga ah.b.Marka hore macmiilka, adeega marka hore.
7. Sawirka shirkadda: u shaqey si sharciga waafaqsan, u maareeya si cilmiyaysan, u shaqeya si ilbaxnimo leh, leh qaab aad u wanaagsan, adeeg tayo sare leh, tayo aad u wanaagsan, tignoolajiyad heersare ah iyo geesinimo aad wax cusub ku soo kordhiso.
8.Siyaasadda tayada leh: tignoolajiyada horumarsan, maaraynta sayniska, injineernimada tayada sare leh iyo badeecadaha, daacadnimada iyo ka go'naanta, iyo adeega meesha jira.
9. Aaminsanaanta ganacsiga: a.maanta qaado dariiqa hal-abuurka ganacsiga, si wanaagsanna uga qaybgal horumarka berrito.b.Qaado jidka hal-abuurka, raadso qorshooyinka horumarinta oo qor cutub cajiib ah.
10.Istaraatiijiyad ganacsi: a.xeeladda kartida, istiraatijiyadda astaanta, istiraatijiyadda hal-abuurka iyo istiraatiijiyadda horumarinta suuqa.b.Hirgelinta istaraatiijiyadda kartida, astaanta, hal-abuurka iyo horumarinta suuqa, xoojinta iyo hagaajinta heerka dhismaha iyo rakibidda, iyo horumarinta iyo ballaarinta awoodda farsamaynta iyo wax-soo-saarka.
11. Qiimaha ganacsiga: waligiis ku qanacsanayn, ku dadaalida heerka koowaad, is-horumarin iyo horumar joogto ah.
12. Deegaanka ganacsiga: xiriirka gudaha ee iswaafaqsan iyo dadaalka wadajirka ah ee warshadda oo dhan;Xidhiidhka dibadeed ee jilicsan oo iga caawiya inaan horumariyo dhammaan jihooyinka.
13.Falsafada shirkadda: maamulka ku jihaysan dadka, adeegga koowaad ee tayada leh, qaabka shaqo adag iyo hufnaanta sare.
14. Hal-ku-dhegga waxqabadka: ku noolaada shaqo adag oo ku horumariyo hal-abuurnimo.
Alxanka dahabka, Gooyaha Laser-ka ee xaashida, Alxanka Tooska ah ee Laser, Mashiinka Cnc Laser, Laser Cnc Machine Iibka, Kaarboon Fiber Laser Cutter,